Fifanintsanana “Afrobasket 2021” : Ratsy fanombohana, resin’i Tonizia, 89-52, ny ekipa malagasy | NewsMada
Fifanintsanana “Afrobasket 2021” : Ratsy fanombohana, resin’i Tonizia, 89-52, ny ekipa malagasy
Niditra amin’ny andro voalohany ny dingana faharoa ny fifanintsanana “Afrobasket”, tanterahina any Kigaly, Roandà, ny ekipa malagasy, omaly. Ratsy ny fanombohana satria resin’i Tonizia tamin’ny isa 89 no ho 52 ny ekipam-pirenena malagasy.
Efa hita taratra hatrany am-piandohan’ny lalao ihany ny traikefan-dry zareo Tonizianina. Izy rahateo no ekipa tompon’ny amboara “Afrobasket” 2017. Teo am-piafaran’ny ampaham-potoana voa­lohany, efa nitarika 22 no ho 16 ity ekipa tompondakan’ny “Afrobasket” farany teo ity. Nanao izay ho afany ihany ny ekipan’i Olivier sy ry Elly, saingy tsy nahatohitra ny mpifanandrina taminy. Isa 42 no ho 29 ny nisarahan’ny roa tonta teo am-pialan-tsasatra. Niezaka nanenjika ny Malagasy, na tsy hampibanaka loatra ny elanelan’isa fotsiny aza, satria efa lasa lavitra ihany ry zareo Tonizianina. Teo am-piafaran’ny lalao, isa 89 no ho 52 ny nandavoan’i Toni­zia an’i Madagasikara.
Raha dinihina iny lalao voalohany iny, nanezaka mafy ihany ny Malagasy kanefa tsy afa-bela hatramin’ny farany. Na izany aza anefa, mendri-piderana ihany ny zava-bitan’ny mpilalao malagasy satria raha ny fantatra, ekipa fahatelo mendrika indrindra eto Afrika ity nifanehatra avy hatrany tamin’izy ireo omaly ity.
Ho amin’ny anio, ny ekipan’ny Repoblika Centrafrique indray ny miandry ny ekipa malagasy. Efa nahazo volontany tamin’ny lalao voalohany, omaly, isika ka antenaina fa hibata fandresena amin’ity lalao faharoa ity. Tsy hisy ny fakana aina fa avy hatrany dia hiatrika ny RD Congo i Madagasikara, rahampitso, lalao fahatelo farany hatrehina ho an’ny “fenêtre 1”.